Nlekọta Nlekọta-Nri - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
Gosipụta obi gị ma mee ihe ndị a
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Nlekọta > Nursing-Nutrition
Nlekọta ọzụzụ BSO
De BSO oge zuru ezu Care - Nutrition akwadebe gị maka ọrụ dị na nwata, ndị agadi na nlekọta ụlọ. Ọ bụ otu ọzụzụ dị irè na ihe ole na ole n'ozuzu. Ị mụta ụzọ kacha mma ị ga-esi nagide onye na-elekọta ya (ma ụmụaka ma ndị agadi) na mkpa ha kpọmkwem. Nke a na ya na ụwa.
Na Nlekọta 2e Nlekọta - Nri ị na-amụta ọtụtụ ihe banyere ilekọta ụlọ: ịkwadebe nri, nri ziri ezi ma dị mfe; ịnọgide na-enwe ụlọ, uwe na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ị na-amụta banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nri na-edozi ahụ ma nweta ihe ọmụma dị mkpa banyere nlekọta ahụ ike. Ị ghaghị ịdị njikere ilekọta ndị mmadụ ma ha bụ nwata ma ọ bụ okenye, nwoke ma ọ bụ nwanyị .... Ihe e mesiri ike n'ebe a bụ maka nlekọta onwe onye, ​​nlekọta na nlekọta na-elekọta na gburugburu ebe obibi.
Na Nlekọta 3e Nlekọta ị mụta otú ị ga-esi na-emeso onwe gị, ndị ọrụ ibe gị na ndị nwere mkpa nlekọta na ọnọdụ ụbọchị. Ị na-azụ na ịchọta ma na-akọrọ, na-arụ ọrụ na ndị nlekọta ndị ọzọ. Ị ga-amụta banyere enyemaka mbụ, nri ahụike na ndabere nke ịkụziri mkpụrụ ndụ. Ị mụta ụzọ e si akwadebe nri na nri ụmụaka, nke dị mma ma dị ụtọ n'otu oge ahụ. A ga-eme ka ị mara iwu ọha mmadụ, ikike gị na ọrụ gị, iwu ahụike ...
N'oge gị ụwa ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Ị na-atọ ụtọ ezigbo ọrụ n'ime otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ ike.
Ị na-enwe obi ụtọ iso ndị mmadụ rụọ ọrụ
Ị nabatara ilekọta ndị ọzọ
Ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma
Ọ na-amasị gị ịrụ ọrụ na ndị mmadụ? Ị nwere mmetụta nke ibu ọrụ? Ị nwere mmasị ná ndụ kwa ụbọchị nke ndị ahụike na ndị ọrịa? Ị nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ ma ị nwere ike ịnagide oge ọrụ ọrụ mgbanwe?
Ị nwere ike ịmalite mgbe niile na usoro nlekọta Nlekọta. Ị ghaghị ịdị njikere ilekọta ndị mmadụ ma ha bụ nwata ma ọ bụ okenye, nwoke ma ọ bụ nwanyị.
Lezienụ anya! Ịkwesịrị ịchọrọ otu maka ọkachamara ị na-abata kpọmkwem na nri akwụkwọ ahụike egosiwo na ị na-arịa ahụike iji rụọ ọrụ na nri. Nkwupụta okwu nkwadoro a dị irè maka akwụkwọ ndị ọzọ (na-aga n'ihu) nke ị na-arụ ọrụ na nri. Onye dọkịta nke ụlọ akwụkwọ ahụ họpụtara ga-enye akwụkwọ a n'ihu 1 October nke afọ akwụkwọ ahụ metụtara. Ọ bụrụ na ị deba aha mgbe e mesịrị, a ghaghị inye akwụkwọ a ozugbo.
Mgbe nhazi 3e elekọta ị nweta ya akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. Mgbe ahụ ọ na-enweta diplọma nke mmụta sekọndrị. ebe aEnwere ike ịchọta ozi ọzọ.
Anyị na-emepe ihe omume Nutrition-Care Training n'ihu ugbu a. Site na afọ 2019-2020 ga-enwe afọ 6e. N'afọ ụlọ akwụkwọ ahụ emesị anyị na-enye afọ ofufo 7e. Ị nwere ike ịdebanye aha ugbu a ruo afọ 5e.
Gaa ebe a na tebụl nkuzi nke BSO-Care Care-Nutrition:
Afọ 3e nke na-erughị ala (37KB, .pdf) (n'oge na-adịghị anya n'ịntanetị)
Afọ 4e nke na-erughị ala (37KB, .pdf) (n'oge na-adịghị anya n'ịntanetị)
Afọ 5e nke na-erughị ala (36KB, .pdf)